Buundada | RayHaber
Buundooyin aamin ah ayaa laga dhisay miyiga Balıkesir; Buundooyinka Hungarianka-Karamanlar iyo Nusret-Kepsut, kuwaas oo qatar weyn ugu jira in la isticmaalo, waxaa burburiyey Degmadda Balıkesir ee Magaalada Weyn waxaana dib loo dhisay sidii badbaado iyo haad laba jibaaran. U furan gawaarida [More ...]
Kartepe Summit-2019, oo diiradda saaraya 'Urbanization iyo Happy Cities', waxay ku socotaa xawaare buuxa. Shirkii lagu qabtay degmada Kartepe, 'Magaalada iyo Gaadiidka' ayaa laga wada hadlay. Isagoo ka hadlayey kalfadhiga, Prof. Gebze University University. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu oo reer Kocaeli ah [More ...]
Buundooyinka ka sarreeya durdurka Porsuk, oo quruxda Eskişehir ku soo kordhinaya, ayaa sii wada dayactirka iyo hagaajinta shaqada Dawladda Hoose ee Magaalada. Dayactirka buundooyinka, oo ah mid ka mid ah astaamaha Eskişehir, waxay bilaabatay sanadkii lasoo dhaafay waxayna socotaa sanadkan. park [More ...]
Isgoysyada sharci darada ah ee ka yimaada buundooyinka iyo wadooyinka waa weyn lama ciqaabi doono. Maxakamadda Hanti-dhowrka ayaa ballan-qaaday in aan wax dakhli dakhli ah lagu diiwaangelinin sanadka 2018 ee wadarta guud ee 132 milyan ee 22 kun ee 276 TL ujuurada sharci-darrada ah ee lagu xaqiijiyey buundooyinka iyo wadooyinka waaweyn, [More ...]
Wasiirka Beeraha iyo Dhirta Bekir Pakdemirli wuxuu yiri: “Dhisidda wadar dhan xNUMX kiiloomitir oo wadooyin ah iyo kiiloomitir 216,61 oo tunelo ah ayaa lagu dhammeeyay magaalada Artvin. Sidoo kale buundada 26,83 iyo dhismaha bucshiraadku way dhammaadeen Iyada oo daraasadahaas lagu qaadaayo Artvin qiyaastii [More ...]
Mashruuca Gaadiidka Tuzla Çayırova
Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sii wadaysaa hirgalinta mashruucyo kaladuwan si ay ugu fidiso gaadiid sahlan oo raaxo leh dhibic kasto oo magaalada ah. Wadooyin cusub ayaa dardar galiya isu socodka dadka, iyada oo ah wado gaadiid kale oo lagu qaado muwaadiniinta [More ...]
Ogeysiiska Qandaraaska: Dayactirka iyo Dayactirka Badeecadaha iyo Badeecadaha u dhexeeya Narlı iyo Malatya
Dayactirka iyo Dayactirka Buundooyinka iyo Isku Xirka u dhexeeya Narlı - Malatya Agaasimeha Guud ee Tareenka Waddanka Turkiga (TCDD) 5. DIIWAANGALINTA DIIWAANGALINTA Dayactirka iyo Dayactirka Buundooyinka iyo Murqaha u dhexeeya Narlı iyo Malatya [More ...]
Dhammaystirka Shaqada Asphalting ee Fatih Sultan Mehmet Bridge
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M.Cahit Turhan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 27 Haziran’da başlanan çalışmaların tamamlandığını söyledi. Turhan, “FSM Köprüsü’ndeki üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabında çalışmaları tamamlayıp bugün köprüyü [More ...]
Dhismaha Ballast Holder ee dhismaha iyo kaniisadaha
Dhismaha Darbiga Dib-u-Kaydinta ee 'Ballast Retainer Wall, Wing Wall iyo Père Covering' oo ku yaal Wadverts iyo Buundooyinka qaybo kala duwan oo Km ah oo ah Haydarpaşa Ankara Line Hasanbey - Sincan Stations. [More ...]
Korantada, shaaha, sonkorta iyo gaaska dabiiciga ah ee dhirta korantada, buundooyinka iyo wadooyinka waa weyn ayaa horseeday in la beddelo. Gobollada ay maamusho 15 Luulyo iyo buundooyinka Fatih Sultan Mehmet iyo toll [More ...]
Gawaarida udhaxeysa Çavuşlu iyo Çıraklı ayaa la dayactiray
Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, oo ahmiyada siisa howlaha gaadiidka ee wadooyinka halbawlaha u ah iyo xarumaha degmada, ayaa sii wada mashruucyada si loo yareeyo gaadiidka muwaadiniinta ku nool xaafadaha ka baxsan xarunta. Macnaha guud, degmada Körfez iyo Çirakli District [More ...]
1915 Caan ah Carabta Lapseki Keson Download Ceremony
M. Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Dhaqaalaha, wuxuu sheegay inay bixin doonto dardar-gelin weyn gobolka marka la dhammeeyo buundada NUManakkale ee 1915, wuxuuna yiri, [More ...]